Cayaartoygii Reer Brazil Ee Qoorta Iyo Xubinta Taranka Laga Jaray Oo Boolisku U Heleen Markhaatiyaal Goob-joog U Ahaa Dilkiisa Iyo Afar Qof Oo Ka Sheekeeyey Sidii Wax U Dhaceen | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Cayaartoygii Reer Brazil Ee Qoorta Iyo Xubinta Taranka Laga Jaray Oo Boolisku U Heleen Markhaatiyaal Goob-joog U Ahaa Dilkiisa Iyo Afar Qof Oo Ka Sheekeeyey Sidii Wax U Dhaceen
(10-11-2018) Dalka Brazil waxa weli ruxaya warka dilkii foosha xumaa ee loo geystay ciyaartoy lagu magacaabi jiray Daniel Correa oo ka tirsanaa naadiga heerka koowaad ee Sao Paulo, kaas oo maydkiisa laga helay duurka iyadoo qoorta iyo xubinta taranka laga jaray.
Falkan oo dhacay 27 October ayaa waxa uu gilgilay guud ahaan dunida, waxaana loo qaybtay ganacsade u dhashay dalkaas oo qirtay inuu isagu sameeyey falkan, hase yeeshee ku dooday inuu kufsaday xaaskiisa.
Sawirro mar dambe la helay oo ka hor intii aan la dilin uu la wadaagay qof ay saaxiibbo yihiin ayaa soo bandhigay in Correa ay xidhiidh lahaayeen inanta uu dhalay Edison Brittes oo ah ninka dilka geystay, hase yeeshee warbaahinta dalkaas ayaa soo bandhigtay warbixin ay ka heleen booliska oo ku saabsan dhacdadan.
Warbixintu waxay sheegtay in boolisku ay heleen afar qof oo markhaatiyaal ah oo goob joog u ahaa sidii dilku u dhacay.
Warbixintu waxay tibaaxday in markhaatiga koowaad iyo ciyaartoyga la dilay ay ka baxeen guriga Brittes oo ay ka dhacaysay xaflad dhalasho oo loo sameeyey Allana oo uu dhalay ninka falka geystay, ayna si toos ah u tageen meherad aan ka fogeyn guriga oo ay kasoo iibsadeen maandooriye si degdeg ahna ugu soo laabteen xafladda. Intaas kaddib ayaa waxa uu markhaatigu sheegay inuu arkay Edison oo dilka geystay oo sii gelaya madbakha gurigiisa oo u jiray masaafo dhan 20 mitir, halkaana uu kasoo qaatay mindi, isaga oo ku qaylinaya “Dil ninka”. Markhaatigu waxa uu ku dooday in Edison Brittes uu ka hor joogsaday inuu garaaco booliska.
“Ma doonayo inaan dhingto. I caawiya!”
Markhaatiga labaad ee warbixinta booliska ee warbaahintu daabacday ka muuqda, ayaa waxa uu sheegay in ciyaartoyga si arxan daran loo dilay. Markhaatigan oo ah gabadh aan la magacaabin, ayaa waxay sheegtay inay indhaheeda ku aragtay, dhagaheedana ku maqashay qof dumar ah oo ay u kala garan weyday Cristiana oo ah xaaskiisa ama Allana oo ka codsanaysa Edison inuu ka qabto Daniel Correa oo isku dayayey inuu kufsado. Waxa kale oo intaa ay ku dartay haweenayda markhaatiga ah in ay maqlaysay cod kale oo ahaa Daniel oo dhiig-baxaya, isla markaana ku qayllinaya: “I caawiya, ma rabo inaan dhinto. I caawiya!”.
Markhaatiga saddexaad ayaa waxa uu isaguna sheegay in Edison uu ka codsaday, in aanay booliska u sheegin waxa uu sameeyey, kaliyana ay ku doodaan inuu ka baxay guriga maadaama uu albaabku furnaa oo dadka xafaladda joogay ka baxayeen.
Qofka afraad ee warbixinta booliska markhaatiga kaga qoran oo dumar ah, ayaa waxay sheegtay inay gashay qolka hurdada Cristiana ee la sheegay in kufsigu ka dhacay, balse aanay ku arag wax calaamad ah oo muujinaysa in kufsi amaba wax isku day kufsi ah uu ka dhacay, balse ay Edison iyo laba qof oo kale ay ciyaartoyga dhulka jiideen iyagoo guriga ka saaraya. Markii ay dibedda geeyeen, ayaa ay si xun u garaaceen, ilaa mar dambe la helay maydkiisa oo qoorta iyo xubinta taranka laga jaray.
Si kastaba ha ahaatee, Edison Bitters, xaaskiisa iyo inantiisa ayaa ku xidhan saldhig boolis, waxaana weli ku socda baadhitaan.